Wholesale ZHS3200 2.0CBM Self loading Concrete Mixer Truck mpanamboatra sy mpamatsy | fotsiny
R&D (Fikarohana sy fitsangatsanganana ataon'ny orinasa)
Asa / Fampirantiana
Paompy beton (Diesel)
ZHS4000 3.0CBM Self Loading Concrete Mixer kamio
ZHS3200 2.0CBM Self Loading Concrete Mixer kamio
Namboarin'i Italia, rafitra fangarona automatique & fampifangaroana。
Famokarana mavitrika be, famerenam-bidy ny ora sy ny asa.
Kamio mixer & Loading fiara atambatra miaraka.
Guarantee fe-potoana 6 volana.
180 ° Rotate Mixer container.
Vonona izahay hizara ny fahalalanay momba ny varotra manerantany ary hanome vahana anao ny vokatra mety amin'ny vidiny mahery setra indrindra. Ka Profi Tools dia manolotra tombony lehibe indrindra amin'ny vola ary vonona hamokatra miaraka amin'ny Factory Customized China Small Self Loading Concrete Mixer Truck, ny tanjonay voalohany dia ny hanome ny mpanjifantsika manerantany miaraka amin'ny kalitao avo, vidin'ny varotra mifanentana, fandefasana afa-po ary miavaka mpamatsy.
Factory Customized China Concrete Mixer Truck, Self Loading Concrete Truck, ny mpiasanay dia mifikitra amin'ny fanahin'ny "Fampivoarana mifototra sy mifampiraharaha", ary ny foto-kevitry ny "Kalitaon'ny kilasy voalohany amin'ny serivisy tsara". Araka ny filan'ny mpanjifa tsirairay dia manolotra serivisy namboarina sy namboarina izahay hanampiana ny mpanjifa hahatratra ny tanjon'izy ireo amin'ny fomba mahomby. Tongasoa ireo mpanjifa avy any ivelany sy any ivelany hiantso sy hanontany!
Modely ： Yuchai 4102 nohafazina
Famindran-toerana piston, Cylinder ： 3.8L － 4cylinder milahatra
Governora ： Mekanika
Fampangatsiahana: rano nangatsiaka, sivana rivotra maina
Hery lehibe: 78kw （116hp）
Max Torque ： 252NF @ 2400RPM
Alternator ： 28V – 1500Wa (53.5A)
Battery: 2 × 12V – 80AH (272A)
Familiana mpanampy ny rafitra familiana herinaratra fampidirana miaraka amin'ny enta-mavesatra indroa amin'ny kodiarana 2.
4 * 4drive
Boaty fanodinam-pandrefesana herinaratra, paompy fanodinana hay, fitaovana fanaraha-maso mihodina. Fehezo ny "hafainganam-pandeha miasa" sy ny "hafainganam-pandeha"
Haavo haingam-pandeha ：
3 – mandroso ， 3 – Teny miafina
Haavo voalohany: 0–5km / h
Volana faharoa: 5–15km / h
Haavo fahatelo: 15-30km / h
Shaft sy Tyro
Familiana kodiarana efatra, reducer hafainganam-pandeha hafainganam-pandeha, reducer gear, hafainganam-pandehan'ny flange.
Aorian'ilay tetezana, atsofohy (+ 28 degre), ny fametrahana ny tetezana amin'ny fitaovana fampihenana ny planeta.
Tyro ： 16-70-22.5PR ， Max Max: 9500kg, 970kPa
Ny freins service karazana kodiarana anatiny sy ny frezy vonjy maika dia ampiasaina amin'ny kodiarana 4, ary paompy servo kely amin'ny boribory roa tsy miankina no ampiasaina. Fiatoana fijanonana karazana tsindry ratsy
Paompin-drano 24V "Self-Priming"
Mikoriana: 90L / M
Tondra-drano roa misy ifandraisany sy fizarana, ， 2 * 410L。
Amin'ny alàlan'ny metatra mikoriana elektromagnetika sy ny fampisehoana ny efitrano fandidiana amin'ny fidiran'ny fidiran'ny rano amin'ny amponga fanaraha-maso.
Afaka mipetraka eo amin'ny sezan'ny sisin'ny mpamily hahafahan'ny paompy.
Fiaramanidina mamoaka paompy misy tsindry mafy
Mixer & Offload
Doboky ny kônda indroa misy visy mampihetsi-po miolaka sy ambany ambany.
Fahafahana amponga ： 3200L
Hafainganana mihodina amponga: 17rpm
Famoahana beton: 2.5m³ / kaontenera
Ny fehezan-kery boribory "mavesatra" dia azo apetraka 180 degre sy fihodinan'ny hydraulic, fanidiana mandeha ho azy avy amin'ny frein hidy. Ny roller dia mihodina amin'ny alàlan'ny paompy sy motera hydraulic amin'ny faritra misokatra, izay misy valizy elektrika amin'ny tanana ao amin'ny efitrano fandidiana sy ao aorian'ilay mixeur.
Ny chute azo esorina dia afaka miantoka mivantana amin'ny alàlan'ny hopper unloading. Satria ny fanitarana mahazatra dia manome extension chute 1.
Paompy Gear: Pike marika / amerikana
Mikoriana: 138 / 88L / Min。
Fanerena ： 27.5MPa
3 tapa-tànana multi-fanaraha-maso lever.
Exchanger hafanana alimina ho an'ny menaka hydraulic cooling
Menaka fidirana mihidy, azo soloina ny sivana solika hydraulic ivelany.
Load sy famahanana
Ny fitaovam-pandrefesana dia miaraka amina sensor sensor milanja mandeha ho azy, fitaovana fampidinana indroa mihetsika ary varingarina misy menaka famerenana, ary ny seranan-tsakafo famahanana fifehezana ny tanana dia manana andraikitra manosika mahazatra.
Fahafahana ： 700L
Fotoana famenoana isaky ny feno ： 6time
Ny efi-birao mihidy dia manana rafitra fanamafisana / fampangatsiahana, varavarankely anoloana.
Seza namboarina ho olona, ​​fanaingoana ny fampiatoana ny fampihenana ary ny fanitsiana ny haavony.
Tifitra lasantsy ： 110L
Menaka hydraulic: 200L
Menaka fanosotra ： 16L
Tanteraka napetraka ： 7500kg
Max entana: 8500kg
Halavany × sakany × haavony: 5300 × 2350 × 2950 mm
Latabatra fampitahana vokatra
Mandefa kamio mixer vita amin'ny beton
Kamio mpanendaka beton nentim-paharazana nentim-paharazana
Famahanana mandeha ho azy, azo ampiasaina ho forklift
Fangaro amin'ny beton ho an'ny fahombiazana avo lenta
Afaka mitondra beton
Arotsaho ho azy ny beton ary ampiasao mivantana izay ilaina
Fangaro amin'ny beton
Ny masinina dia kely sy malefaka, afaka mihodina 180 degre irery izy, mety amin'ny tetikasa rehetra, tsy misy fetrany ny haavony, ny sakany sns.
Ny tanky fampifangaroana, ny fampifangaroana ny elatra sy ny endrik'ireo vokatray dia vokatra patanty novolavolainay rehetra. Mifanaraka amin'ny fenitra nasionaly sy ny fenitra Eoropeana ny beton izay atsangana, ary azon'ny mpanjifa ampiasaina izany amin'ny fahatokisana azy.
Tafiditra amin'ireo fiara enjeniera mekanika dia azonao atao ny mandeha amin'ny làlana tsy misy takelaka ahazoana alàlana.
Mitsitsy asa, olona roa afaka miasa, olona efatra afaka miasa tetikasa kely.
Be sy be ny fiara, ka matetika dia voafetra ny haavony, voafetra ny fivezivezena sns.
ankamaroan'ireo betsaka ary boky, mety amin'ny fitaterana matihanina, saingy tsy mety ny mamaky sy mamoaka.
1.Be sy be ny fiara, ka matetika dia voafetra ny haavony, voafetra ny fivezivezena sns.2.Large betsaka ary boky, mety amin'ny fitaterana matihanina, saingy tsy mety ny mamaky sy mamoaka.
Fampitahana latabatra amin'ny mpanamboatra hafa
TENA MAHARITRA Mandefa kamio mixer vita amin'ny beton
Cooler solika hydraulic
Ny kamio tsirairay avy dia misy a cooler solika hydraulic maimaimpoana hiantohana ny asa 24 ora tsy tapaka Aza manana an'io ampahany io na miakatra fanampiny.
Haingam-pandeha amin'ny maodely mitovy amin'izany:
Kaontenera / ora 5 ka hatramin'ny 8 Kaontenera / ora 3 ka hatramin'ny 4
Momba ny famoahana entana
ny mekanika can arm miala miaraka amin'ny fampifangaroana tanky nefa tsy misy fiatraikany amin'ny famoahana entana ary mitahiry fotoana bebe kokoa. Tsy maintsy aondrana ny sandry midina ary avy eo notaterina.
Mavesatra kokoa noho ny hafa noho ny habetsahan'ny entana Ampiasao matetika ny famaky maivana kokoa mba hitehirizana ny vidiny fa hitondra piozila kalitao bebe kokoa.
Ilay tanky mifangaro
Taorian'ny fikolokoloana sy ny hafanana, ny fenitra sy ny kalitaon'ny hateviny dia voafehinay tsara. matetika nanome avy amin'ny mpamatsy hafa, ny kalitao dia sarotra antoka SY mora simba
Ataovy azo antoka ny famoahana moramora ary alaviro ny fahatapahana noho ny fahasimban'ny varingarina hydraulic mandritra ny famoahana Tsy misy varingarina hydraulic na kalitaon'ny varingarina ratsy
16° ，Mifanaraka amin'ny fenitra fitongilanana ny tanky eropeana sy amerikana, ny fahombiazan'ny fifangaroana dia avo kokoa noho ny hafa
19° na 20°, na dia azony atao aza ny mampisy fitaovana bebe kokoa ny tank, mampitombo ny enta-mavesatra amin'ny tanky sy ny motera izy io, mampitombo ny taham-pahombiazana ary tsy mahomby.
Tsy misy fitandremana, fandidiana tsotra, fatiantoka ateraky ny fandidiana tsy mety ataon'ny mpandraharaha, handray feno izahay responsibility ho an'ny tambiny rehetra
Sarotra ny fandidiana, tsy ampy fampiofanana, ary tsy tompon'andraikitra amin'ny fahaverezana vokatry ny fandidiana tsy mety
Manaraka: ZHS4000 3.0CBM Self Loading Concrete Mixer kamio
Paompy konkritika namboarina kamiao miaraka amin'ny mixer